Facelift အပြောင်းအလဲ ကိုရရှိလာတော့မယ့် Mercedes-Benz GLE ! – MyMedia Myanmar
Facelift အပြောင်းအလဲ ကိုရရှိလာတော့မယ့် Mercedes-Benz GLE !
Mercedes Benz GLE-Calss SUV ကားကို နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခဲ့တာကအတော်လေးတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အရွယ်အစား အလယ် အလတ်ရှိတဲ့ အဆိုပါ ကားမော်ဒယ် အနေနဲ့ကတော့ 2022 Model Year အတွက် ရည်ရွယ် ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ကာ နောက်တစ်နှစ်အကြာ မှာတော့ GLE Coupe ဆိုပြီး ဆက်တိုက်ထွက်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Segment ထဲမှာတော့ GLE က ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ ကားကောင်းတစ်စီး ဖြစ်နေသေးပေမယ့် အခုတော့ ဒီတိုင်းမထားပဲ Mercedes အနေနဲ့ Facelift အသစ်ပေးဖို့ စီစဉ်လာခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ကားမော်ဒယ်သစ်ကို ဂျာမနီက နာမည်ကျော် Nurburgring မှာ စမ်းသပ်နေတဲ့ Spy Shots တွေ ထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်ပြီး အရှေ့နဲ့ အနောက်ဘက်က Lights တွေနားမှာတော့ Camouflage တွေ အုပ်ထားသေးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု မြင်ရသ လောက် ပြောရရင် Facelift Version အသစ်မှာ သေချာပေါက် Headlight နဲ့ Taillight အသစ်တွေ တပ်ဆင်လာမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး မကြာ သေးမီက အသစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ S-Class တွေနဲ့ အရမ်းကြီး အလှမ်းမဝေးသွားအောင် ဆန်းသစ်ပေးထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း Camo တွေအုပ်ထားထားမထားထား ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ တော့ ကားဘီးတွေက လွဲလို့ သိပ်ပြီး ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲ မလာနိုင်ဘူး လို့ပဲ ယူဆရပါတယ်။
ကားရဲ့ အတွင်းခန်းပိုင်းမှာတော့လည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ သိသိသာသာပါလာနိုင်ပြီး GLE ကို Up-To-Date ဖြစ်အောင် ထားဖို့ဆိုရင် မကြာ ခင်ကမှ အသစ် ထွက်ထားတဲ့ E-Class နဲ့ အတူတူ လောက်ထားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပုံလည်း ရပါတယ်။ အခုလို အဆင့်မြှင့်တင်ထားမှုတွေ ထဲမှာတော့ Touch Capacitative Control တွေနဲ့ ဖြစ်လာမယ့် စတီယာတိုင် ကိုလည်း ‌မျှော်လင့်ရသလို Mercedes-Benz User Experience ( MBUX ) စနစ် ကိုလည်း တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာအောင် ထပ်လုပ် ပေးလာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်း ကတော့ GLE အတွက် အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမား မျှော်လင့်မထားသေးပဲ Base 2.0 Liter Four-Cylinder Engine နဲ့ Mild-Hybrid EQ Boost ပါဝင်မယ့် 3.0 Liter Turbocharged Inline-Six အင်ဂျင်တို့ကိုပဲ သုံးလာနိုင်ပါတယ်။ AMG ဆီက 4.0 Liter Twin Turbo V 8 နဲ့ အခြားသော အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးကောင်းပေးလာနိုင်ပြီး Supply Chain ပြဿနာ ကြောင့် ရပ်နားရတော့မယ့် V 8 Engine တွေကို မာစီးဒီး တို့က ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်လာမလား ဆိုတာလည်း စောင့်ကြည့် ရမှာပါ။ အခု မြင်ရသလောက်တော့ GLE SUV ပဲ ရှိသေးပေမယ့် GLE Coupe အတွက် လည်း Facelift Version အသစ် ရရှိလာနိုင်ပါ သေးတယ်။
ဘာပဲပြောပြော Facelifted GLE ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာ အနည်းငယ် စောနေသေးပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာလည်း ဂျာမနီ ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ကောင်း BMW က ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ပဲ X5 အတွက် Update ဖြစ်အောင် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါ Facelifted X5 မှာ ဆိုရင် လည်း အတွင်းခန်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေပါ ပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီး iX မှာ လို Screen အကြီးတွေလည်း တပ်ဆင်လာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တော့ နိုင်ငံတွင်း ရောင်းအားတွေအတွက် BMW နဲ့ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်နေတာကြောင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ခြေလှမ်းတွေကိုလည်း အမြဲ စောင့်ကြည့်နေကြတာ မဆန်း ပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့ အဆိုပါ ကားသစ် GLE ကို ဘယ်အချိန်မှာ ချပြလာမလဲ ဆိုတဲ့ရက် အတိအကျကို မသိရသေး ပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် ကားမော်ဒယ် တစ်ခုထွက်အပြီး ၃ နှစ် လောက်မှာ Facelift Version ကို ချပြလေ့ရှိတာကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၂ နှစ်လယ်ပိုင်း လောက်မှာ ‌ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
The post Facelift အပြောင်းအလဲ ကိုရရှိလာတော့မယ့် Mercedes-Benz GLE ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-23T18:00:46+06:30August 23rd, 2021|MYCARS MYANMAR|